Iyo itsva vhezheni yeNixOS 18.09 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeNixOS 18.09 yave kuwanikwa
Nix OS kugoverwa kweGNU / Linux, yazvino uye inoshanduka kugovera zvakasununguka zvakagadzirwa inoitirwa kusimudzira manejimendi ehurongwa hwegadziriro kuburikidza neNix package maneja.
Iko kusanganisa kunoita kuti NixOS iende kure zvakanyanya kune vashandisi vatsva. Iyo mhedzisiro inogona kuve isingatarisirwe mhedzisiro yeLinux inoshanda sisitimu iyo yakavakirwa pane chaiyo novel design dhizaini.
Izvo zvakanyanya kuomarara kupfuura dzimwe sarudzo dzekuvandudza seArch Linux iyo isina graphical mushandisi yekugadzirisa maficha.
NixOS yanga iri pane yangu runyorwa rweLinux distros kuyedza kwechinguva, nekuda kweiri nyore kuti vanhu vazhinji vataura zvakanyanya nezvazvo kwandiri.
1 Nezve NixOS
1.1 NixOS 18.09 iri pano
1.2 Dhawunirodha NixOS 18.09
Nix OS yakatanga sechirongwa chekutsvaga makore mashoma apfuura uye rave rinoshanda rinoshanda sisitimu neyakaomarara yekufunda curve kugadzirisa system services.
NixOS yakazvimiririra yekuparadzirwa kweLinux yakagadzirwa neNixOS Foundation yakavakirwa muNetherlands.
Inomhanya mune iyo KDE desktop nharaunda, asi inoshanda neyayo Nix Package Manager. Iyo yazvino vhezheni ishanduro 18.09, iyo yakaburitswa nguva pfupi yadarika.
Nix OS ine maitiro asina kujairika- Inotarisirwa kuvandudza manejimendi marongero ehurongwa. Iyo yese inoshanda sisitimu, inosanganisira iyo kernel, kunyorera, system mapakeji, uye ekugadzirisa mafaira, inogadzirwa neNix Package Manager.
Nix anoparadzanisa mapakeji ake kubva kune mumwe nemumwe. Inoshandisa yayo yega chimiro dhizaini maitiro futi. Semuenzaniso, kugovera uku hakuna iyo / bin, / sbin, / lib, kana / usr madhairekitori mune yayo faira chimiro. Mese mapakeji anochengetwa mu / nix / chitoro panzvimbo.
Zvimwe zvinozivikanwa zvitsva zvinosanganisira kukwidziridzwa kwakavimbika, kudzoreredzwa, kumisikidzwa kwesystem masisitimu, sosi-yakavakirwa modhi ine mabhinari, uye akawanda-mushandisi package package.
Pasuru maneja anonyatso kuunganidza anoshanda masisitimu ezve kernel kune software kunyorera uye system mapakeji. Iyo zvakare inogadzira yakanyatsogadziriswa mafaira ekumisikidza kusangana ako maratidziro.
Izvi zvinoreva kuti iwe unogadzira yako yakadzama runyorwa rwezvaunoda kuisa nekugonesa.
NixOS inoita izvi kuburikidza neyekuzivisa system yekugadzirisa modhi. Inotsanangura iyo system yekumisikidza zvinhu mune yefaera faira.
NixOS 18.09 iri pano
Vanhu vari seri kweichi chirongwa munguva pfupi yapfuura yakazivisa vhezheni itsva yehurongwa hwayo, mavanosvika vhezheni yavo nyowani NixOS 18.09.
Codenamed Jellyfish, NixOS 18.09 inotsigirwa kusvika Kubvumbi 2019. Kuwedzera kune akati wandei matsva uye akagadziridzwa mapakeji, iyi vhezheni ine zvimwe zvinozivikanwa zvinogadziridzwa.
Ruzivo rwekutanga runogona kusimbiswa mukuburitswa uku nderekuti Nix package maneja akagadziridzwa kune vhezheni 2.1 iyo inonyanya kugadzirisa bug-inogadziridza uye zvakare inoderedza kuyeukwa kwekushandisa mune mamwe mamiriro.
Iyo Nix simaki haichazogadzikisike kune akawanda-mushandisi kuisirwa macOS. Zvakadaro, iwe unogona kutaurira mugadziri kuti amhanye mune akawanda-mushandisi maitiro.
Platform rutsigiro: x86_64-linux uye x86_64-darwin senguva dzose. Rutsigiro rwe aarch64-linux rwakaita sezviri mushanduro dzakapfuura, haina kuenzana neiyo x86-64-linux vhezheni, asi nekuedza kuzadzisa parity.
Mukuburitswa kutsva uku Isu tinoona kuti iyo Linux Kernel ichiri kuchengetedzwa mushanduro yayo 4.14 LTS nepo glibc yakakwidziridzwa kubva pa2.26.
Kune izvo zviri mamiriro edesktop isu tinogona kuratidza izvo Mukuburitswa kutsva uku kunouya neGnome 3.28 kana padivi reKDE Plasma tinogona kuiwana mune yayo vhezheni 5.13, nharaunda dzese dzine maficha ane iwo mavhezheni.
Dhawunirodha NixOS 18.09
Chekupedzisira, kana iwe uchida kurodha pasi kugoverwa kweLinux kuti ukuedze, unogona kuenda kune yayo yepamutemo saiti uye utore mufananidzo mune yayo yekurodha chikamu.
Saizvozvowo pane saiti iwe unowana zvinyorwa zvinokubatsira iwe mukumisikidza maitiro. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo itsva vhezheni yeNixOS 18.09 yave kuwanikwa